Gadzirisa: Tine hurombo, Paive Neine Dambudziko Kukwira Iyo Faira Kukanganisa Mukati Windows 10
Windows 10 inotsigira kumisikidza ISO uye IMG mafaera. Neichi chinoshanda, munhu anogona kukwira ISO uye IMG mafaera pasina kushandisa chero chechitatu-bato software.
Nekudaro, dzimwe nguva, kana uchisimudza iyo ISO kana IMG faira refaira, unogona kuwana "Ndine urombo, paita dambudziko pakusimudza faira"Kukanganisa.
Kana iwe urikutorawo iko kukanganisa kumwe kuyedza kukwira iyo ISO kana IMG faira, unogona kuyedza yakapihwa pazasi mhinduro, nenzira iyoyo.
Solution 1 ye9
Kopa uye unamate iyo ISO / IMG kune imwe nzvimbo
Paunowana iko kukanganisa, teedzera uye unama (usashandise mafambiro ekufambisa) iyo ISO / IMG faira refaira riri mubvunzo kune imwe nzvimbo (kunyanya rakasiyana dhiraivha) pakombuta yako wozoedza kukwirisa zvakafanana. Asi nei zvakadaro? Vamwe maneja ekudzivirira vanowedzera "P" (shoma faira) hunhu kumafaira makuru. Iyi sparse faira hunhu haina kutsigirwa neiyo disc inokwenenzesa utility.
Solution 2 ye9
Tarisa uone kana iyo ISO / IMG faira yakavharwa
Mafaira anotorwa kubva internet angave akavharirwa ne Windows 10. Izvi zvinowanzoitika kune ese faira mhando. Iyo Yekubatanidza Manager mu Windows inovharira mamwe mafaera anotorwa kubva paInternet kana kutumirwa nemaemail. Kuti utarise kana iyo faira yakavharwa uye vhura iyo faira:
Step 1: Bhurawuza iro folda rine iyo ISO / IMG faira. Kungofa pane iyo ISO / IMG faira uye tinya Properties.
Step 2: Mu General tab, sarudza iyo Unblock cheki uye wobva wadzvanya iyo Shandisa bhatani.
Solution 3 ye9
Tangazve File Explorer
Nguva zhinji, kutangazve iyo File Explorer inogadzirisa iko kukanganisa. Kuti utangezve iyo File Explorer kana Windows Explorer, ita izvi:
Step 1: Vhura iyo Task Manager. Dzvanya pa More details.
Step 2: pasi Nzira tab, tsvaga Windows mupanguri kupinda, kurudyi pairi uye wovhara iyo Dzorerazve kuita.
Solution 4 ye9
Tarisa uone kana iyo ISO / IMG faira rakaora
Kunyangwe iyo disc inokwenenzesa utility inoratidza "Iyo dhisiki yemufananidzo faira yakashatiswa" mhosho meseji kana iyo ISO / IMG faira yakashatiswa, inogona kuratidza "Ndine hurombo, pakanga paine dambudziko kukwirisa iyo faira" kukanganisa kunyangwe iyo faira rikaora.
Kana iwe uri kuyedza kukwira a Windows/ Linux inoshanda sisitimu ISO / IMG faira, tarisa kune yedu maitiro ekutarisa kana ISO / IMG iri bootable gwara rekutarisa mashandiro efaira.
Solution 5 ye9
Bvisa ISO / IMG faira remukati uchishandisa faira yekuchengetedza faira
Kana iyo ISO / IMG faira iine isina-bootable Windows kana Linux inoshanda sisitimu, unogona kushandisa mafaira ekuchengetedza zviwanikwa senge 7-ZIP (yemahara) kubvisa iyo ISO / IMG faira zvirimo. Kubvisa iyo ISO / IMG faira yezvinyorwa:
Step 1: Isa 7-Zip kana isati yaiswa pakombuta yako.
Step 2: Kungofa pane iyo ISO / IMG faira, sarudza 7-ZIP, uye osarudza Bvisa mafaira or Bvisa pano.
Solution 6 ye9
Tarisa uone kana iyo ISO / IMG yatokwidzwa kare
Uine default marongero, iwe paunoyedza kukwidza iyo ISO / IMG faira ratove rakakwidzwa, Windows 10 vhura iyo yakaiswa ISO / IMG dhairekitori. Izvo zvakati, zvinogona kukanda iko kukanganisa kwataurwa pamusoro apa mune zvimwe zviitiko.
Saka, ndokumbira utarise kana iyo ISO kana IMG faira ratokwidzwa. Akaisa ISO / IMG mafaera anoratidza kumusoro mune Iyi PC. Kuti uburuke, tinya-kurudyi pane yakasungirirwa dhiraivhi wobva wadzvanya iyo Bvisa sarudzo.
Solution 7 ye9
Uninstall wechitatu-bato ISO maneja
Chechitatu-bato ISO yekumisikidza chirongwa kana ISO maneja inogona kunge ichipesana neyakavakirwa-mukati disc inokwenenzesa utility. Kana iwe wakamisa chero, uninstall iyo uye edza kukwidza iyo ISO / IMG faira uchishandisa chakavakirwa-mukati chishandiso.
Solution 8 ye9
Dhawunirodha iyo ISO / IMG faira zvakare
Kana iwe uchifungidzira kuti iyo ISO / IMG faira inogona kunge yakashatiswa, unogona kuyedza kurodhaunirazve. Haufanire kuwana "Ndine urombo, paita dambudziko pakusimudza faira"Kukanganisa.
Solution 9 ye9
Shandisa chechitatu-bato faira kumisikidza software
Sekupedzisira sarudzo, unogona kuyedza kushandisa yechitatu-bato kumisikidza software. Kune akawanda emahara ISO ekumisikidza mhinduro kutenderedza for Windows 10. Isu tinokurudzira Virtual CloneDrive, iyo yanga iriko kweanopfuura makore gumi ikozvino.
Maitiro Ekugadzirisa Akaora System Mafaira Mune Windows 10